Taliye Ciidan iyo Askar ilaala U aheyd oo Lagu Dilay Duleedka Degmada W/weyn Sh/Hoose.
Wednesday June 27, 2018 - 10:10:42 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay qarax askar iyo saraakiil katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya balse ay tababaratay dowladda Mareykanka.
sawir hore gaari la weeraray
Wararka ka imaanaya deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in qarax lagu dilay sarkaal sare iyo ciidamo ilaala u ahaa uu ka dhacay meel ku dhow degmada Wanllaweyn.
Qaraxan oo ahaa mid xoogan waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan Maleeshiyaadka Bangrafta ee ay Tababaratay Dowlada Mareykanka.
Sida ay sheegeen dadka deegaanka qaraxa ah ayaa haleelay gaari Cabdi Bile ah oo kolanyada qeyb ka ahaa waxaana inta la xaqiijiyay lagu dilay ugu yaraan Afar askari oo Bangrafta ah kuwaasi oo uu ku jira Taliyihii watay Kolanyada la beegsaday kaasi oo lagu magacaabi jiray Kabtan Oomane.
Sidoo kale qaraxan waxaa lagu dhaawacay Sideed askari oo isla ciidamadii la qarxiyay kamid ahaa kuwaas oo ay tababar siiyeen saraakiisha Americanka ah ee saldhigga ku leh garoonka diyaaradaha Ballidoogle.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada qaraxa lala helay ayaa ka baxeen magaalada Muqdisho waxeyna kusii jeedeen garoonka diyaaradaha Bilidoogle sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha DF-ka.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan askarta iyo saraakiisha lagu dilay sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha.